စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေ လောင်စာအရည်ထုတ်ဖို့ - ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကနေ လောင်စာဆီထုတ်တဲ့နည်းတွေထဲက ပလပ်စတစ်နဲ့ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေ လောင်စာ အရည်ထုတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်တဲ့ သုတေသနတွေ အကြောင်း ဒုပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်က ပြောပြပေးမှာပါ။
wastes to liquid fuel - Dr Moe Thanda Kyi
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၂ မျိုးကနေ ထုတ်ပါတယ်။ လောင်စာဆီကို။ ပထမ အနေနဲ့က ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပေါ့။ အအေးဘူးခွံတွေ၊ ရေသန့်ဘူးခွံတွေ၊ ဆပ်ပြာရည်ဘူးခွံတွေ၊ အဲဒီလိုမျိုး တွေကနေ ပိုင်အိုရိုက်စစ် pyrolysis နည်းနဲ့ လောင်စာဆီ ထုတ်တာတမျိုးပါ။ နောက်တမျိုးက biomass ဆိုတာပေါ့နော်။ လယ်ယာထွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့ ကောက်ရိုးတို့ စပါးခွံတို့ ပါမယ်။ နောက် woody biomass လို့ ပြောတဲ့ သစ်တိုသစ်စပေါ့။ လွှစာမှုန့် သဘောမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးကနေ လောင်စာဆီ ပြန်ပြီးထုတ်တဲ့ အပိုင်းဆိုပြီးတော့ ၂ ပိုင်း၊ သုတေသန အသေးစားလေးတွေ လုပ်ကြပါတယ်။”
မေး။. ။“ပထမဆုံး ပလပ်စတစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါ။ ပလပ်စတစ်က အမျိုးအစားတွေ အများကြီးဆိုတော့ ပလပ်စတစ်မှန်သမျှ အကုန်သုံးလို့ ရပါသလား။”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“ပလပ်စတစ်ကတော့ သုံးတဲ့ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ ထွက်ကုန် product ကလည်း ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံက အအေးဘူးခွံတွေ၊ ဆပ်ပြာရည်ဘူးခွံတွေ၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေကို အများစု သုံးမယ် ဆိုရင် ဒီဇယ်အမျိုးအစား လောင်စာဆီထွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကလည်း အမျိုးအစားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဓါတ်ဆီတို့၊ အိမ်သုံး heating အနေနဲ့ အိမ်သုံးဆီ အမျိုးအစားတွေ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ သုံးတဲ့ကုန်ကြမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ product ကလည်း အမျိုးအစားတွေ ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းကနေ ထုတ်နိုင်တာက. အများကြီးပေါ့နော်။ ဓါတ်ဆီကအစ အိမ်သုံးဆီ အထိ ထွက်လာနိုင်တယ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သူတို့ကို ထုတ်သလဲ။ ထုတ်တဲ့နည်းကတော့ တူမှာ မဟုတ်ဖူးပေါ့နော်။”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ လောင်စာနဲ့ တွန်းကန်ပစ္စည်း (Fuel and Propellant) ဌာနမှာ ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ လောင်စာဆီ ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ပိုင်ရိုိုလိုက်ဆစ် နည်းကို သုံးပါတယ်။ အဲဒီနည်းက အပူချိန်ကို ၇၀၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်လောက် အထိ အပူပေးပြီးတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ pyro ဆိုတာက မီးပါ။ lysis ကတော့ decomposition ဖြစ်သွားတဲ့ သဘော- ပြိုကွဲအောင် ခြေဖျက်တာ ပေါ့နော်။ ပြိုကွဲသွားတဲ့ သဘောမျိုး။ ဒီနည်းအရ ဆိုရင် အဓိကက အောက်ဆီဂျင် မပါဘူးပေါ့နော်။ နောက်တခါ အောက်ဆီဂျင်ကို အဓိက ဖယ်ထုတ် ပြီးတော့မှ ပိုင်ရိုလိုက်ဆစ်နည်းကနေ ထွက်လာတဲ့ အငွေ့တွေကို - volatile gas ပေါ့။ ဒီအငွေ့တွေကိုမှ ပြန်ပြီးတော့ ဖမ်းမယ်။ ဖမ်းပြီးတော့မှ တခါ အအေးပြန်ခံ ပြီးတော့မှ ဒီ liquid fuel လောင်စာရည် အမျိုးအစားကို ရတာပေါ့နော်။
အဲဒီလို ရတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီဇယ်တွေ သူ့ကို ပြန်ပြီးတော့ GCMS လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းတာတဲ့ စက်တွေနဲ့ ပြန်တိုင်းလိုက်မယ် ဆိုရင် ဓါတ်ဆီတို့၊ ဒီဇယ်တို့၊ oil ဆီတို့ ၊ gas ဓါတ်ငွေ့တို့ ၊ wax ဖယောင်းရည်၊ နောက်တခါ သူ့ရဲ့ residue အကျွင်းအကျန်တွေ၊ အဲဒီလိုမျိုး ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးအစားလိုက် ကွဲပြီး တရာ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အဲဒီလို percent လေးတွေ ကွဲပြီး ထွက်လာမယ် ပေါ့။ အဲဒါမှာမှ ကိုယ်သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ product ရဲ့ percent က ဘယ်ဟာက မျုားတယ်၊ ဘယ်ဟာက နည်းတယ်ဆိုတာကို analysis ဆန်းစစ်လို့ ရမယ်။ နောက်တခါ catalyst ကို သုံးတာနဲ့ မသုံးတာနဲ့လည်း ကွာပါသေးတယ်။ catalyst ဆိုတာက ဓါတ်ကူပစ္စည်းပါ။ ကိုယ်သုံးတဲ့ ဓါတ်ကူပစ္စည်းပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ product က အမျိုးအစားတွေ ကွဲသွားနိုင်ပါသေးတယ်။”
မေး။. ။“ဒီသုတေသန လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို လက်တွေ့မှာရော တကယ်သုံးနေသလား၊ ဒီဆီကိုလေ။ ဓါတ်ဆီတို့ ဘာတို့။ ဒီစွန့်ပစ် ပစ္စည်းက ထုတ်လာတဲ့ ဆီကို လက်တွေမှာ သုံးနေပြီလား။”
ဒေါကတာမိုးသန္တာကြည်။. .“မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ လက်တွေ့မှာ အပြင်မှာ အသေးစားလေးတွေ လုပ်တဲ့ဟာ အပြင်မှာတော့ ရှိတယ်။ ကျောင်းတွေကတော့ စီးပွါးဖြစ်အနေနဲ့ ထုတ်ဖို့ ဆိုတာက မလွယ်သေးဘူးပေါ့။lab scale ဓါတ်ခွဲခန်းထုတ် အနေနဲ့ ထွက်တဲ့ product အနည်းအကျဉ်းလေး တွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။”
မေး။. ။“ဒါဆို ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့တွေ လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။. ကုန်ကြမ်းလည်း ရှိတယ်၊ နည်းလဲသိပြီ ဆိုတော့ ဆက်လုပ်ဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့နော်။”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“ဆက်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။”
မေး။. ။ “အဲဒါကတော့ ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းကနေ ရတာပေါ့နော်။biomass လို့ပြောတဲ့ ဇီဝလောင်စာ- ကောက်နှံစပါးတို့ ဘာတို့၊ ဒီလယ်ယာထွက်ကုန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ၊ နောက် သစ်တိုသစ်စ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ၊ အဲဒီကနေ လောင်စာအရည်ကို ဘယ်လို ထုတ်သလဲ ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“ biomass ကနေ liquid fuel - လောင်စာဆီ ထုတ်တာက ကျတော့ ကျမတို့ လောင်စာနဲ့ တွန်းကန်ပစ္စည်း ဌာနမှာ သုတေသနကတော့ lab scale အသေးစားလေးတွေပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါတွေက ကျတော့ လယ်ယာထွက် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းအမျိုးအစားမျိုး ဖြစ်တဲ့ ကောက်ရိုးတို့၊ စပါးခွံတို့၊ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းလို့ ပြောပေမယ့် သူတို့ကို အခုအချိန်မှာ ဒီ့ပြင် တခြားနေရာတွေမှာ တိရိစ္ဆာန်အစားအစာတွေ ပြန်ပြီးထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း ပြန်ပြီးတော့ သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ ကောက်ရိုးတို့ စပါးခွံတို့က နေပြီးတော့မှ လောင်စာအရည် liquid fuel ထုတ်တာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဌာနမှာ။ နောက်တခါ woody biomass ပေါ့။ အဲဒါက သစ်တိုသစ်စ၊ အလေအလွင့် ဖြစ်တော့မယ့် အရာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ ပြောရရင် လွှစာမှုန့် မျိုးပေါ့။ အဲဒါမျိုးကနေလည်း လောင်စာအရည် ထုတ်ပါတယ်။ အသေးစားလေး. ပါပဲ။
မေး။. ။“အကြမ်းဖျင်းဘယ်လို ထုတ်တယ် ဆိုတာ ပြောပြလို့ ရမလား။”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“အကြမ်းဖျင်းကတော့ ကျမတို့ ဌာနမှာ အများစုကို pyrolysis နည်း ပဲ သုံးပါတယ်။ အပူချိန် မြင့်မြင့်ပေးပြီး ပြိုကွဲအောင် လုပ်တာ များပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ပဲ volatile gas တွေ ထွက်လာမယ်။ gas တွေ ထွက်လာတာပေါ့။ အဲဒီ gas တွေ ကိုမှ ပြန်ပြီး အအေးခံပြီးတော့မှ လောင်စာအရည် အမျိုးအစား ရတာပေါ့နော်။”
မေး။. ။“စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေ လောင်စာအရည် ထုတ်တာကို ဘယ်နေရာတွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနိုင်သလဲ ရှင်းပြပေးပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုသုတေသနတွေ ပိုပြီး လုပ်ဖို့ လိုတယ် ဆိုတာသိအောင်ပါ”
ဒေါက်တာမိုးသန္တာကြည်။. ။“သူက ဓါတ်ဆီတို့ ဒီဇယ်ဆီ တို့ပေါ့နော်။ အဲဒီနေရာတွေမှာ ဒီ biofuel ကို အစားထိုးပြီးတော့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခါ အိမ်သုံးတွေ ပေါ့နော်။ အိမ်သုံးတွေမှာ light heating ဆီတို့ အဲဒီလို နေရာတွေမှာလည်း သူက fossil fuel - ရေနံမြေကရတဲ့ လောင်စာ နေရာတွေမှာ အခု တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ bio fuelအမျိုးအစားတွေကို အစားထိုးပြီးတော့ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် စီးပွါးဖြစ် ထုတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာတွေက ဈေးကြိးနေသေးတဲ့အတွက် စီးပွါးဖြစ်ထုတ်ဖို့ ခက်ခဲမယ်။ ဒီ သုံးမယ့် ကုန်ကြမ်းကတော့ ဈေးမကြီးပါဘူး။”
စှနျ့ပဈပစ်စညျးအမြိုးမြိုးကနေ လောငျစာဆီထုတျတဲ့နညျးတှထေဲက ပလပျစတဈနဲ့ စိုကျပြိုးရေးစှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကေနေ လောငျစာ အရညျထုတျဖို့ မွနျမာနိုငျငံလကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာ တက်ကသိုလျမှာ လုပျတဲ့ သုတသေနတှေ အကွောငျး ဒုပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျက ပွောပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“စှနျ့ပဈပစ်စညျး ၂ မြိုးကနေ ထုတျပါတယျ။ လောငျစာဆီကို။ ပထမ အနနေဲ့က ပလပျစတဈ စှနျ့ပဈပစ်စညျးပေါ့။ အအေးဘူးခှံတှေ၊ ရသေနျ့ဘူးခှံတှေ၊ ဆပျပွာရညျဘူးခှံတှေ၊ အဲဒီလိုမြိုး တှကေနေ ပိုငျအိုရိုကျစဈ pyrolysis နညျးနဲ့ လောငျစာဆီ ထုတျတာတမြိုးပါ။ နောကျတမြိုးက biomass ဆိုတာပေါ့နျော။ လယျယာထှကျ စှနျ့ပဈပစ်စညျး ဖွဈတဲ့ ကောကျရိုးတို့ စပါးခှံတို့ ပါမယျ။ နောကျ woody biomass လို့ ပွောတဲ့ သဈတိုသဈစပေါ့။ လှစာမှုနျ့ သဘောမြိုးပေါ့။ အဲဒီလိုမြိုးကနေ လောငျစာဆီ ပွနျပွီးထုတျတဲ့ အပိုငျးဆိုပွီးတော့ ၂ ပိုငျး၊ သုတသေန အသေးစားလေးတှေ လုပျကွပါတယျ။”
မေး။. ။“ပထမဆုံး ပလပျစတဈနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ပွောပွပေးပါ။ ပလပျစတဈက အမြိုးအစားတှေ အမြားကွီးဆိုတော့ ပလပျစတဈမှနျသမြှ အကုနျသုံးလို့ ရပါသလား။”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“ပလပျစတဈကတော့ သုံးတဲ့ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီးတော့ ထှကျလာတဲ့ ထှကျကုနျ product ကလညျး ကှဲပွားမှုရှိပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ကမြတို့ မွနျမာနိုငျငံက အအေးဘူးခှံတှေ၊ ဆပျပွာရညျဘူးခှံတှေ၊ အဲဒီလိုမြိုးတှကေို အမြားစု သုံးမယျ ဆိုရငျ ဒီဇယျအမြိုးအစား လောငျစာဆီထှကျနိုငျပါတယျ။ ကနျြတာတှကေလညျး အမြိုးအစားတှပေျေါမူတညျပွီးတော့ ဓါတျဆီတို့၊ အိမျသုံး heating အနနေဲ့ အိမျသုံးဆီ အမြိုးအစားတှေ ထှကျနိုငျပါတယျ။ သုံးတဲ့ကုနျကွမျးပျေါမူတညျပွီးတော့ ထှကျလာတဲ့ product ကလညျး အမြိုးအစားတှေ ကှဲသှားနိုငျပါတယျ။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ပလပျစတဈစှနျ့ပဈ ပစ်စညျးကနေ ထုတျနိုငျတာက. အမြားကွီးပေါ့နျော။ ဓါတျဆီကအစ အိမျသုံးဆီ အထိ ထှကျလာနိုငျတယျ ဆိုတော့ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ သူတို့ကို ထုတျသလဲ။ ထုတျတဲ့နညျးကတော့ တူမှာ မဟုတျဖူးပေါ့နျော။”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ လောငျစာနဲ့ တှနျးကနျပစ်စညျး (Fuel and Propellant) ဌာနမှာ ပလပျစတဈစှနျ့ပဈ ပစ်စညျးကနပွေီးတော့ လောငျစာဆီ ထုတျတဲ့ နရောမှာ ပိုငျရိုလိုကျဆဈ နညျးကို သုံးပါတယျ။ အဲဒီနညျးက အပူခြိနျကို ၇၀၀ ဒီဂရီဆဲလျစီးယပျဈလောကျ အထိ အပူပေးပွီးတော့ ထုတျလုပျတဲ့ နညျးစဉျ ဖွဈပါတယျ။ pyro ဆိုတာက မီးပါ။ lysis ကတော့ decomposition ဖွဈသှားတဲ့ သဘော- ပွိုကှဲအောငျ ခွဖေကျြတာ ပေါ့နျော။ ပွိုကှဲသှားတဲ့ သဘောမြိုး။ ဒီနညျးအရ ဆိုရငျ အဓိကက အောကျဆီဂငျြ မပါဘူးပေါ့နျော။ နောကျတခါ အောကျဆီဂငျြကို အဓိက ဖယျထုတျ ပွီးတော့မှ ပိုငျရိုလိုကျဆဈနညျးကနေ ထှကျလာတဲ့ အငှတှေ့ကေို - volatile gas ပေါ့။ ဒီအငှတှေ့ကေိုမှ ပွနျပွီးတော့ ဖမျးမယျ။ ဖမျးပွီးတော့မှ တခါ အအေးပွနျခံ ပွီးတော့မှ ဒီ liquid fuel လောငျစာရညျ အမြိုးအစားကို ရတာပေါ့နျော။
အဲဒီလို ရတဲ့ အခါမှာလညျး ဒီဇယျတှေ သူ့ကို ပွနျပွီးတော့ GCMS လို့ချေါတဲ့ တိုငျးတာတဲ့ စကျတှနေဲ့ ပွနျတိုငျးလိုကျမယျ ဆိုရငျ ဓါတျဆီတို့၊ ဒီဇယျတို့၊ oil ဆီတို့ ၊ gas ဓါတျငှတေို့ ၊ wax ဖယောငျးရညျ၊ နောကျတခါ သူ့ရဲ့ residue အကြှငျးအကနျြတှေ၊ အဲဒီလိုမြိုး ရာခိုငျနှုနျး အမြိုးအစားလိုကျ ကှဲပွီး တရာ ရာခိုငျနှုနျးမှာ အဲဒီလို percent လေးတှေ ကှဲပွီး ထှကျလာမယျ ပေါ့။ အဲဒါမှာမှ ကိုယျသုံးတဲ့ ကုနျကွမျးပျေါ မူတညျပွီးတော့ ထှကျလာတဲ့ product ရဲ့ percent က ဘယျဟာက မြုားတယျ၊ ဘယျဟာက နညျးတယျဆိုတာကို analysis ဆနျးစဈလို့ ရမယျ။ နောကျတခါ catalyst ကို သုံးတာနဲ့ မသုံးတာနဲ့လညျး ကှာပါသေးတယျ။ catalyst ဆိုတာက ဓါတျကူပစ်စညျးပါ။ ကိုယျသုံးတဲ့ ဓါတျကူပစ်စညျးပျေါ မူတညျပွီးတော့ ထှကျလာတဲ့ product က အမြိုးအစားတှေ ကှဲသှားနိုငျပါသေးတယျ။”
မေး။. ။“ဒီသုတသေန လုပျတဲ့ဥစ်စာကို လကျတှမှေ့ာရော တကယျသုံးနသေလား၊ ဒီဆီကိုလေ။ ဓါတျဆီတို့ ဘာတို့။ ဒီစှနျ့ပဈ ပစ်စညျးက ထုတျလာတဲ့ ဆီကို လကျတှမှော သုံးနပွေီလား။”
ဒေါကတာမိုးသန်တာကွညျ။. .“မွနျမာနိုငျငံမှာကတော့ လကျတှမှေ့ာ အပွငျမှာ အသေးစားလေးတှေ လုပျတဲ့ဟာ အပွငျမှာတော့ ရှိတယျ။ ကြောငျးတှကေတော့ စီးပှါးဖွဈအနနေဲ့ ထုတျဖို့ ဆိုတာက မလှယျသေးဘူးပေါ့။ lab scale ဓါတျခှဲခနျးထုတျ အနနေဲ့ ထှကျတဲ့ product အနညျးအကဉျြးလေး တှပေဲ ရှိပါသေးတယျ။”
မေး။. ။“ဒါဆို ဆကျပွီးလုပျဖို့တှေ လိုသေးတယျပေါ့နျော။. ကုနျကွမျးလညျး ရှိတယျ၊ နညျးလဲသိပွီ ဆိုတော့ ဆကျလုပျဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့နျော။”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“ဆကျပွီးတော့ လုပျနိုငျရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့။”
မေး။. ။ “အဲဒါကတော့ ပလပျစတဈ စှနျ့ပဈ ပစ်စညျးကနေ ရတာပေါ့နျော။ biomass လို့ပွောတဲ့ ဇီဝလောငျစာ- ကောကျနှံစပါးတို့ ဘာတို့၊ ဒီလယျယာထှကျကုနျ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှေ၊ နောကျ သဈတိုသဈစ၊ စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှေ၊ အဲဒီကနေ လောငျစာအရညျကို ဘယျလို ထုတျသလဲ ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“ biomass ကနေ liquid fuel - လောငျစာဆီ ထုတျတာက ကတြော့ ကမြတို့ လောငျစာနဲ့ တှနျးကနျပစ်စညျး ဌာနမှာ သုတသေနကတော့ lab scale အသေးစားလေးတှပေဲ လုပျခဲ့တာပါ။ အဲဒါတှကေ ကတြော့ လယျယာထှကျ စှနျ့ပဈ ပစ်စညျးအမြိုးအစားမြိုး ဖွဈတဲ့ ကောကျရိုးတို့၊ စပါးခှံတို့၊ စှနျ့ပဈ ပစ်စညျးလို့ ပွောပမေယျ့ သူတို့ကို အခုအခြိနျမှာ ဒီ့ပွငျ တခွားနရောတှမှော တိရိစ်ဆာနျအစားအစာတှေ ပွနျပွီးထုတျတဲ့နရောတှမှောလညျး ပွနျပွီးတော့ သုံးလို့ရပါတယျ။ အဲဒီ ကောကျရိုးတို့ စပါးခှံတို့က နပွေီးတော့မှ လောငျစာအရညျ liquid fuel ထုတျတာတှလေညျး လုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ဌာနမှာ။ နောကျတခါ woody biomass ပေါ့။ အဲဒါက သဈတိုသဈစ၊ အလအေလှငျ့ ဖွဈတော့မယျ့ အရာမြိုးပေါ့။ ဥပမာ ပွောရရငျ လှစာမှုနျ့ မြိုးပေါ့။ အဲဒါမြိုးကနလေညျး လောငျစာအရညျ ထုတျပါတယျ။ အသေးစားလေး. ပါပဲ။
မေး။. ။“အကွမျးဖငျြးဘယျလို ထုတျတယျ ဆိုတာ ပွောပွလို့ ရမလား။”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“အကွမျးဖငျြးကတော့ ကမြတို့ ဌာနမှာ အမြားစုကို pyrolysis နညျး ပဲ သုံးပါတယျ။ အပူခြိနျ မွငျ့မွငျ့ပေးပွီး ပွိုကှဲအောငျ လုပျတာ မြားပါတယျ။ အဲဒီနညျးနဲ့ပဲ volatile gas တှေ ထှကျလာမယျ။ gas တှေ ထှကျလာတာပေါ့။ အဲဒီ gas တှေ ကိုမှ ပွနျပွီး အအေးခံပွီးတော့မှ လောငျစာအရညျ အမြိုးအစား ရတာပေါ့နျော။”
မေး။. ။“စှနျ့ပဈပစ်စညျးကနေ လောငျစာအရညျ ထုတျတာကို ဘယျနရောတှမှော တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးနိုငျသလဲ ရှငျးပွပေးပါ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုသုတသေနတှေ ပိုပွီး လုပျဖို့ လိုတယျ ဆိုတာသိအောငျပါ”
ဒေါကျတာမိုးသန်တာကွညျ။. ။“သူက ဓါတျဆီတို့ ဒီဇယျဆီ တို့ပေါ့နျော။ အဲဒီနရောတှမှော ဒီ biofuel ကို အစားထိုးပွီးတော့ သုံးနိုငျပါတယျ။ နောကျတခါ အိမျသုံးတှေ ပေါ့နျော။ အိမျသုံးတှမှော light heating ဆီတို့ အဲဒီလို နရောတှမှောလညျး သူက fossil fuel - ရနေံမွကေရတဲ့ လောငျစာ နရောတှမှော အခု တီထှငျဖနျတီးလိုကျတဲ့ bio fuel အမြိုးအစားတှကေို အစားထိုးပွီးတော့ သုံးဖို့ ရညျရှယျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ စီးပှါးဖွဈ ထုတျဖို့ ဆိုရငျတော့ သုံးရတဲ့ ပစ်စညျးကရိယာတှကေ ဈေးကွိးနသေေးတဲ့အတှကျ စီးပှါးဖွဈထုတျဖို့ ခကျခဲမယျ။ ဒီ သုံးမယျ့ ကုနျကွမျးကတော့ ဈေးမကွီးပါဘူး။”